Semalt na - akọwa ihe kpatara nyocha nke weebụsaịtị ji dị mkpa maka uto azụmahịa gị
Keykpụrụ dị mkpa nke ahịa na-aga nke ọma bụ ịmara ndị ahịa gị na ịchọrọ ha mkpa. Ofmata ihe ndị ọbịa webụsaịtị gị na-achọ na etu ha ga-esi nye ha nwere ike ime ma ọ bụ mebie azụmahịa. Nchịkọta weebụsaịtị nwere ike ịba uru na ịchọpụta ihe na-eme ndị ọbịa gị akara na otu esi agbanwe ọbịbịa ha na ahịa.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe nchịkọta weebụ bụ na ihe kpatara o ji dị mkpa maka uto azụmahịa gị.
Gịnị bụ nchịkọta weebụ?
Nchịkọta Weebụ bụ mkpokọta ozi sitere na weebụ iji nweta nghọta na iji mee ka ahụmịhe onye ọrụ na ọnụnọ n'ịntanetị.
Nchịkọta mkpokọta webụsaịtị gbasara onye na-eleta saịtị gị yana etu ndị ọbịa si akpa àgwà ozugbo ha bịara. Site na ezigbo ihe nyocha, ị nwere ike ịchọpụta afọ ole ndị ọbịa gị dị, ndị agbụrụ ha, ebe ha bi, na ọtụtụ ndị ọzọ. Can nwekwara ike ịchọpụta, n'ụzọ nkịtị na bọtịnụ bọtịnụ, gịnị dugara ha na weebụsaịtị gị, ogologo oge ha nọrọ ebe ahụ na ibe akwụkwọ, wdg. Ofdị data a dị mkpa iji mee ka weebụsaịtị gị rụọ ọrụ nke ọma na o kwere omume na ịmepụta Ọdịnaya na-amasị gị na ahịa ahịa gị. N'aka nke ya, ịnwere ike ịme ndozi na mgbanwe dịka akụkọ nyocha nke weebụsaịtị si dị; nke a nwere ike inyere gị aka na-eto eto azụmaahịa gị.
Kedu ihe kpatara nchịkọta weebụsaịtị ji enyere aka?
Mara ndị ọbịa gị ma melite ahụmịhe onye ọrụ ha!
Mgbe ị na-eme mkpebi gbasara azụmahịa gị, ọ dị mkpa naanị maka ilekọta ndị ahịa gị, mana ebe enwere ike ị meziwanye ahụmịhe nke onye ọrụ ha. Mkpebi ndị a kwesịkwara, n'ọtụtụ oge, na-eje ozi iji dọta ndị ahịa ọhụrụ. N'iburu ihe a nile n'uche, ịmara ndị ọbịa bịara ebe nrụọrụ weebụ gị dị oke mkpa ịme mkpebi ziri ezi.
Y’oburu n’inwe mmeko nke ndi nlere gi na ntanetiri gi - ya bu nwoke ma obu nwanyi, onodu ha, ebe ha bi, ihe ha choro, wdg. N'otu ụzọ ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ike soro ihe ngwaọrụ, ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ ndị ọbịa gị na-achọkarị mgbe ị na-abanye saịtị gị, ị ga-enwe ike lelee ma melite ndakọrịta saịtị gị.
Ihe omuma atu di nfe bu na oburu na igha otutu ndi obia na eji igwe eji ekwu okwu, igha ima ime ka ihe diri webusaiti gi. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ngwaọrụ nyocha gị na-achọpụta afọ na okike nke ndị ọbịa gị, ị nwere ike ịhazi websaịtị ahụ ka ọ baara ha uru ma na-amasị ha.
Knowingmara ndị ọbịa gị bụ ezigbo ụzọ iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị n’ahịa kwesịrị ekwesị. Nwelite nke ụdị a ga - agba ndị mmadụ ume ka ị nọrọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ogologo oge, ma, n'aka nke ya, ga - eduga ngbanwe dị elu.
Choputa ọdịnaya gi nke gara nke oma
Nchịkọta ihe nyocha weebụ ga-egosipụta ọdịnaya gị kachasị mma. I nwere ike imuta ihe edere na-adọta echiche kacha, nleta ndị kacha ogologo, na ibe ndị mmadụ na-eleta ma emesịa. N’uzo ozo, inwere ike ihu ihe ichoro nke oma nke oma, ikwe ka iji ya baara gi uru.
Dịka ọmụmaatụ, ozugbo ịchọpụtara ọdịnaya ọdịnaya ama ama, ịnwere ike ịgbakwunye njikọ azụta, ịkpọ bọtịnụ emereme, wdg na ibe ma ọ bụ duzie ndị ọbịa n'ụzọ dị mfe na ibe edebanye. Nanị ịmara ebe ị ga-etinye mgbalị gị ga-enyere gị aka ịkwalite mgbanwe ntụgharị na azụmahịa gị n'ozuzu ya.
N’otu aka ahụ, inwere ike imegharị peeji ndị na-eduga ma tinyekwuo ihe ọmụma ma ọ bụ na-eme nyocha ya niile. Ọzọkwa, ịnwere ike ịtụgharị ọdịnaya ahụ na-aga nke ọma n'ofe ụzọ ndị ọzọ wee mezie ya maka mgbasa ozi mmekọrịta, webinar scripts, wdg.
Ọzọkwa, ịchụ nta nke ọdịnaya gị ga-egosipụta nke iberibe na-adịghị arụ ọrụ nke ọma. Nwere ike itinye oge iji meziwanye ọdịnaya ndị na - adịkarịghị mma, ma ọ bụ jiri nghọta mee ihe mgbe ị na - emepụta ọdịnaya - ọ bara uru karịa.
Na-eme ka SEO gị na ebe nrụọrụ weebụ dị
Nchọpụta ihe na - achọ mma (SEO) dị mkpa na ọganiihu nke weebụsaịtị gị yana ya mere azụmahịa gị. Di elu ego nke okporo ụzọ weebụ gị na-adọta, ka ọnụọgụ nke mkpuru na mkparịta ụka dị elu.
Nchịkọta weebụsaịtị nwere ike ịkwalite SEO gị n'ọtụtụ ụzọ. Site na ịmara ebe mmasị ndị ọbịa gị na ihe ngosi, ị ga - aka enwe ike iwepụta ọdịnaya achọrọ ma gosipụta Google na ngwa nchọta ndị ọzọ. Ọzọkwa, ntinye ederede ga-eme ka ị nweta nghọta azụlinks.
Ọ bụrụ na ijikọ ngwaọrụ nyocha gị na Google, ị nwere ike soro nkebi ahịrịokwu ọchụchọ nke na-ebute ọtụtụ okporo ụzọ na weebụsaịtị gị. Nke a bara uru iji hụ na etinye mkpịsị ugodi na nkebi ahịrịokwu ndị ahụ ka ha jiri ọdịnaya gị na metadata.
You pụrụ ọbụna ịga otu nzọụkwụ n'ihu ma jiri nsuso ọchụchọ saịtị. Nke a gosipụtara gị ihe ndị ọbịa na-achọ mgbe ha bịara na websaịtị gị. Nchịkọta nchịkọta a na-enye gị ohere ịchọpụta ma ọdịnaya gị dị ugbu a dabara na ihe ndị ọbịa gị chọrọ. Knowingmara ma ị na-emezu ihe ha tụrụ anya ga-enyere gị aka ịhazigharị ọdịnaya gị iji nye ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ ma mee ka ndị ọbịa bụrụ ndị ahịa. Nwere ike ikwulite ụfọdụ echiche maka ịde blọgụ ọhụụ.
Amata njiri mara di elu
Nchịkọta mkpokọta weebụ nwere ike soro ebe otutu ihe ndekọ gị sitere. Ozugbo ichoputara ihe nzoputa gi di elu, i gha ike ime ihe azum aka iji bulite ha karisia. Ọzọkwa, ịmara mpaghara gị adịghị ike ga-enyere gị aka imeziwanye ha ma bulite okporo ụzọ na saịtị gị.
Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ gị na - enweta ọtụtụ ndị ọbịa ya site na ngwa nchọta, nke a na - agwa gị na SEO gị na - arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ndị ọbịa gị na-esite na mgbasa ozi Facebook ma sie ike ọ bụla site na ngwa nchọta ọchụchọ, ị nwere ike ịme karịa Facebook ibe gị ma na-agbachapụ SEO gị iji mee ka nchọta ọchụchọ dị mma.
Mara njikọ gị na mpụga
Nakwa ịchọpụta ebe ntụgharị uche gị si abịa, nyocha nke saịtị ga-agwa gị onye ị na-ezo, ma ọ bụghị nke akpọrọ njikọ njikọ. Ozugbo edepụtara njikọ njikọ ọnụ gị, ị nwere ike iji ozi a wee kpọtụrụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ ma tụọ ndụmọdụ maka ịrụ ọrụ.
Mmekorita ya na ulo oru ndi ozo nwere ike inyere aka gi aka ito. Nkwalite nkwalite obe na nkwanyerịta ọnụ bụ ụzọ dị mma iji rite uru ma azụmaahịa gị na njikọta a. Knowingmara ụdị mmekorita azụmahịa ga-akacha baara gị uru, ma maka ha, bụ nzọụkwụ mbụ n'ịmebe mmekọrịta ahụ dị mkpa. Nwere ike ịbịaru ahịa zụrụ azụ ma kesaa ha nyocha nyocha gị, na-eme ka ha yie ka ha kwenye na ntinye gị.
Sochie usoro e-commerce
Azụmaahịa gị nwere ike ree ọrụ, ngwaahịa, sọftụwia ma ọ bụ ihe dị iche iche niile. Ihe ọ bụla ị na-ere, mkpesa banyere mkpokọta weebụ gị bụ akụkọ dị mkpa iji mara. Can ga - ahụ nghọta dị mkpa dịka ọnụego ntụgharị, ntụgharị ọnụego, ngụkọta ego na ngwaahịa ndị ọzọ, wdg, ha niile dị n'otu akụkọ. Dịka ọmụmaatụ, ihe ahịa gị bụ, ịnwere ike itinye uche gị na ịkwalite nke ahụ karịa n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Keepnọgide na-agwa usoro ntinye aka bara uru na ịhazi nkwado ọnụ ga-eme ka ahịa dịkwuo elu. Itinye akara mete e-azụmaahịa gị bụ akụkụ dị mkpa n'ịzụlite azụmaahịa na-aga nke ọma.
Kedu akụrụngwa nyocha Web nke m kwesịrị iji?
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ nchịkọta weebụsaịtị dị yana ọ dị mkpa ịhọrọ ngwaọrụ zuru oke site na ụlọ ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi, nke a na-akwanyere ùgwù. Nchịkọta webụsaịtị weebụ Semalt na-enye ọtụtụ ihe nghọta iji nyere aka na azụmaahịa gị.
Ọnye na-bụ Semalt?
Tọrọ ntọala na 2013, Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ zuru oke nwere oke. Ha na-enye ngwaọrụ weebụ maka ọrụ nyocha dị elu yana ọtụtụ SEO na ọrụ weebụ ndị ọzọ. Semalt nwere ọtụtụ narị ndị ahịa nwere afọ ojuju, ọtụtụ n'ime ha ahapụla ide ederede na nyocha vidiyo na weebụsaịtị ụlọ ọrụ.
Semalt nwere ike inyere gị aka:
Nyochaa nlele ntanetị na ntanetị
Nyochaa ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi
Chọpụta njehie njikarị peeji nke
Otu egwuregwu na Semalt na-asụ ọtụtụ asụsụ gụnyere Bekee, French, Italian, Turkish, na ọtụtụ ndị ọzọ, yabụ echegbula onwe gị maka asụsụ ịbụ ihe mgbochi n'etiti gị na uto azụmahịa gị. Ndi otu a bu ndi okacha mara n’ubi gi, ma ha di njikere iwere ase gi.
Turbo na nduru
Na 2014, ndị otu Semalt kwagara n'ọfịs ọhụrụ. Mgbe ha ruru, o juru ha anya ịchọpụta nduru n’otu akwụkwọ ifuru. Mgbe ha mechara nyocha, ha chọpụtara na onye nwe ụlọ ọrụ gara aga nwere ya mana ha achọghị ya. Ndị otu ahụ nwere obi ụtọ nke ukwuu na ha nwere onye otu ọzọ. Ha debere mbe wee kpọọ ya Turbo. Ha wepụtara oge mụọ banyere nri kacha mma maka nduru na otu esi elekọta ha ma zụta ya nnukwu akwarium ọhụrụ. Ugbu a, ọ na-ebi ndụ obi ụtọ n'ọfịs Semalt ma bulie ya elu na ụlọ ọrụ mascot.
Tonabata ndị nchịkọta weebụsaịtị nwere ike ime ka ihe dị iche na - aga esi na azụmaahịa gị, ma ọ bụ ọdịda gị adaa. Knowingmara ndị ọbịa gị na ihe ha na-achọ bụ isi ihe dị mma iji bulie ọnụnọ ịntanetị gị na ire ahịa gị nke ọma. Toolhọrọ ngwá ọrụ nwere aha ọma dị ka Semalt Web Analytics ga-enye gị ohere soro ọdịnaya gị na ihe ịga nke ọma nke ahịa, mara usoro ndị ọbịa gị na, nke kachasị mkpa, melite nleta gị na ọnụego ntụgharị ahịa.